राजनीति Archives - बडिमालिका खबर
प्रतिनिधि सभा चुनावमा भाग लिन पार्टी दर्ता कहिलेसम्म ?
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मङ्सिरमा हुने निश्चितजस्तै छ । निर्वाचन कानुनअनुसार आगामी मङ्सिर २२ गते अघि नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले बताउँदै आएको छ । निर्वाचनमा सहभागी हुन आयोगमा २ पटक राजनीतिक दल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । चुनावमा भाग लिन निर्वाचनको मिति घोषणा पूर्व नै […]
विवादित राज्यमन्त्री विमलाको राजीनामा स्वीकृत
विवादमा आएकी लुम्बिनी प्रदेशकी राज्यमन्त्री विमला वलीको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीले स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण राज्यमन्त्री वलीले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको जानकारी दिएका हुन् । लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै केसीले राज्यमन्त्रीबाट असार १२ गते आएको राजीनामालाई स्वीकृत गरिएको बताए । उनले राजीनामा दिएको विषय सञ्चारमाध्यममा आएपछि मात्रै मुख्यमन्त्रीले […]
नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसालले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई जवाफ फर्काएका छन् । प्रचण्डले एमालेमा आफूहरुले बिउ रोपेर आएको र केही समयपछि त्यो फुल्ने र फल्ने अभिव्यक्ति दिएपछि भुसालले पनि जवाफ फर्काएका हुन् । ‘आज कमरेड प्रचण्ड कहीँ भन्नुभएछ, हामीले एमालेमा बीऊ रोपेका छौं, हेर्नुहोला फल्छ भनेर। उहाँले जे भन्नुभएको छ यसलाई सम्मान नै […]
कांग्रेस दार्चुलाका उपसभापति ठगुन्ना माओवादीमा प्रवेश
दार्चुला– नेपाली कांग्रेस दार्चुलाका उपसभापति ललित ठगुन्ना नेकपा माओवादी केन्द्रमा फर्किएका छन्। ठगुन्नालाई बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीमा स्वागत गरेका छन्। माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका उनी पछि कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए। आजै विप्लवको साथ छाडेका ओमप्रकाश पुनसहित ६७ जना सदस्य माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन्।
मन्त्रीहरुलाई माधव नेपालको निर्देशन : पार्टीको इज्जत राखेर काम गर्नुस्
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्ना मन्त्रीलाई प्रशिक्षण दिएर पठाएका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय तीनकुनेमा नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई बोलाएर उनले विवादित काम नगर्न निर्देशन दिएका हुन् । विहान १० बजेतिर नेपालले सहरी मन्त्री मेटमणि चौधरी, पर्यटन मन्त्री जीवनराज श्रेष्ठ, श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवर, स्वास्थ्यमन्त्री भवानी खापुङ र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसीलाई बोलाएर प्रशिक्षण दिएका […]
धनगढी– नेकपा एमालेको कैलाली जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष रतन थापालाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ। एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको सोमबार बसेको बैठकले थापालाई अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। उनलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने निर्णय गरेसँगै दुर्गा जोशीलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरिएको छ। थापालाई कारबाही गर्न एमालेको जिल्ला कमिटीले प्रदेश कमिटीमा सिफारिस गरेको थियो। जिल्ला कमिटीलाई […]
बामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टी बहुपदीय हुने भएको छ । बामदेव गौतम संयोजक रहने गरी मंगलबार घोषणा भएको पार्टीमा सात जना उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ । पार्टी घोषणा कार्यक्रममा संयोजक गौतमले पार्टी बहुपदीय पद्धतिमा जाने बताएका हुन् । घोषणा अनुसार एक अध्यक्ष, प्रत्येक प्रदेशमा इन्चार्ज बन्नेगरि ७ जना उपाध्यक्ष र एकजना महासचिव […]
वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता केन्द्रीय समन्वय समितिमा ७० जना केन्द्रीय समिति सदस्य हुने भएका छन् । जसमा गौतमपत्नी तुल्सी (तुलसा) थापा र छोरा हरिषदेव गौतम पनि केन्द्रीय सदस्य रहेका छन् । रातोपाटीलाई प्राप्त केन्द्रीय समिति सदस्यको सूचीअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेकी थापालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यको दोस्रो नम्बरमा राखिएको छ । यस्तै गौतमका छोराको नाम […]
आज नयाँ पार्टी घोषणा गर्दै वामदेव गौतम, के राख्दैछन् आफ्नो पार्टीको नाम?
केही समयअघि नेकपा (एमाले) छोडेका राष्ट्रिय सभा सांसद वामदेव गौतमले नयाँ पार्टी खोल्ने भएका छन्। नयाँ पार्टी घोषणाका लागि मंगलबार दिउँसो उनले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका छन्। भृकुटीमण्डपस्थिति रिपोर्टर्स क्बलमा दिउँसो तीन बजे उनको पत्रकार सम्मेलन हुँदैछ। यसअघि उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक बनेका थिए। अभियानका नामबाट उनले केही दिनअघि भेला पनि […]
काठमाडौ — एकीकृत समाजवादीबाट नवनियुक्त मन्त्रीहरुले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नव नियुक्त चार मन्त्रीलाई सपथ सपथ खुवाएकी हुन्। एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, मेटमणि चौधरी सहरी विकासमन्त्री, भवानीप्रसाद खापुङ स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, शेरबहादुर कुँवर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीलाई भण्डारीले सपथ खुवाएकी […]
सरकारले खाली भएको ठाउँमा ११ जना सहसचिवलाई अतिरिक्त समूहमा राखेको छ। जबकि अहिले देशभर १७ जना सहसचिवको दरबन्दी रिक्त छ। अतिरिक्त समूहमा राखिएका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने गरिँदैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खाली बसेका सहसचिवहरूलाई रिक्त रहेको ठाउँमा पठाउन ढिलो गरेको छ। अतिरिक्त समूहमा राखिएको सहसचिवहरूको ड्युटी मन्त्रालयको बरण्डामा हुने गरेको छ। उनीहरू बिहान […]
नवनियुक्त मन्त्रीको शपथ बिहान ११ बजे शीतल निवासमा
काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार नियुक्त गरेका मन्त्रीहरुको शपथ आज हुँदैछ । आइतबार साँझ देउवाले कांग्रेस, माओवादीका मन्त्रीलाई यथावत् राख्दै एकीकृत समाजवादीका पाँच नयाँ मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रेस सल्लाहकार टिका ढकालका अनुसार नव नियुक्त मन्त्रीको शपथ सोमबार बिहान ११ बजे गराउने तयारी भइरहेको छ । एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरुले आजै पदबाट राजीनामा दिएका […]
धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक अगामी असार १६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । सरकारको आग्रहमा प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना टाँस्दै १६ गतेसम्म बैठक स्थगित गरिएको जनाएको छ । असार १ गते आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले प्रदेशसभामा अगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् । बजेटमा […]
धनगढी — नागरिक उड्यन तथा पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्। आलेले शुक्रबार आफूले ४८ घण्टाभित्र राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए। त्यसै अनुसार अध्यक्ष नेपाललाई राजीनामा पत्र बुझाएको आलेनिकट स्रोतले बतायो। मन्त्री आलेले आफ्नो कार्यकालमा भएका कामको विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्ने भएको छ । दिउँसो १ बजेबाट शुरु हुने बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोक सेवा आयोगको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०७७ साउन–२०७८ असार) पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अर्को कार्यसूची छ […]
मन्त्री हेरफेरविरुद्ध उभिएका एकीकृत समाजवादीका ६ सांसदले लिए हस्ताक्षर फिर्ता
मन्त्री हेरफेरविरुद्ध उभिएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० मध्ये ६ जना सांसदले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीसमेत रहेका प्रेमबहादुर आलेसहित ६ जना सांसदले शुक्रबार पार्टी नेतृत्वलाई ७ बुँदे मागपत्र बुझाउँदा दिएको पत्रबाट आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएका हुन् । पार्टी नेतृत्वले विगतमा कमजोरी भएको र अब सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएपछि आफूहरुले हस्ताक्षर […]
नेपाल प्रहरीमा डीआईजी बढुवा सिफारिस भएसँगै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) पदमा ३२ वटा दरबन्दी रिक्त भएको छ । असार ८ मा गृहसचिव नेतृत्वको बढुवा समितिले १७ जना एसएसपीलाई प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)मा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिसअनुसार एक सातापछि गृहमन्त्रीले डीआईजी पदमा नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । डीआईजी सिफारिस गरेसँगै प्रहरीको […]
गाँजासम्बन्धि विधेयक संसदमा अघि नबढेपछि शेरबहादुर तामाङ आक्रोशित
नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आफूले दर्ता गरेको गाँजासम्बन्धि विधेयक अघि बढाउँन माग गरेका छन् । बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले विधेयक दर्ता गरेको ८ सय ९६ दिन भइसकेको भन्दै सो विधेयक अघि बढाउन माग गरे । संसदमा सांसदले उठाएको विषयहरुमध्ये ८ प्रतिशतमात्र कार्यान्वयन हुने गरेको बताउँदै उनले संसदले गर्नुपर्ने […]
धनगढी — सुदूरपश्चिमका ४ नेताले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी परत्याग गरेको घोषणा गरेका छन्। महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य तथा किसान र सुकुम्वासी संगठनका अध्यक्ष ओमप्रकास पुन, केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य शंकरबहादुर खड्का, महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य तथा महाकाली इञ्चार्ज दलबहादुर धामी र विशेष कमिटी सदस्य रमेश परियारले पार्टी परत्यागको घोषणा गरेका हुन्। चारै […]
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गरेका रवि लामिछानेले आफू सभापति पदमा रहेको खुलाएका छन् । दल दर्ताका लागि मंगलबार अपराह्न निर्वाचन आयोग पुगेका लामिछानेले आफ्नो दलमा १९ सदस्य रहेको र आफू सभापतिमा चयन भएको बताएका छन् । उनले दल दर्तापछि मात्रै अन्य सदस्यहरुको नाम खुलासा गर्ने बताएका छन् । यसैबीच राष्ट्रियसभा गृहमा पार्टीको नाम घोषणा गरेर […]
एमाले कैलालीका अध्यक्ष रतन थापालाई सोधियो स्पष्टिकरण
स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध अन्तरघात गरेको आरोपसहित एमाले जिल्ला कमिटी कैलालीले जिल्ला अध्यक्ष रतन थापालाई ३ दिने स्पष्टिकरण सोधेको छ। असार ५ गते जिल्ला इन्चार्ज नारदमुनि रानाले अध्यक्ष थापालाई २३ बुँदे स्पष्टिकरण सोधेका हुन्। उनलाई तीन दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नपठाए पार्टी विधान बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ। ‘तपाई जिल्ला पार्टी अध्यक्षको हैसियतले समग्र […]